Waa maxay macnaha naqshadeynta tifaftirka? | Abuurista khadka tooska ah
Maanta, awoodda muuqaalka Waxay noqotay wax gebi ahaanba aan la dafiri karin, maadaama inta badan macluumaadka ay dadku helaan maalin kasta ay uga yimaadaan indhaha, marka lagu daro, waxaa si cilmiyaysan loo caddeeyay inay dadku leeyihiin xusuusta aragga oo kordhay maqalka.
Sababtaas awgeed ayaa ah muuqaalka jireed wuxuu bilaabaa inuu yeesho muhiimad weyn oo ay weheliso muuqaalka muuqaalka ah, maadaama bina-aadamku sifiican wax uga barto isticmaalka garaafyada ama jaantusyadaWaxay sidoo kale awood u leeyihiin inay si fiican u xasuustaan ​​sawir si aad uga fudud qoraalka oo ay xitaa aad ugu qanacsan yihiin naqshadaha u muuqda inay nadiif yihiin, fudud yihiin oo nidaamsan yihiin.
1 Ma ogtahay waxa naqshadaynta tifaftirku tahay?
2 Waa maxay muhiimadda ay leedahay nashqadeynta tifaftirka?
Ma ogtahay waxa naqshadaynta tifaftirku tahay?
Dhismayaashaasi waxay isu rogaan kuwo muhiim u ah inta la og yahay naqshadaynta tifaftirka, taasi waa, laantaas naqshadeynta garaafka leh yaa leh ujeedada ugu weyn waa qaabeynta iyo halabuurka nooc kasta oo daabacaad ah, ha ahaato joornaalada, buugaagta, wargeysyada, iyo kuwa kale. Intaas waxaa sii dheer, shaqada ugu weyn ee naqshadeeye xirfadeed waa inuu la yimaado naqshad ku filan soo jiidasho leh oo wax ku ool ah akhristayaasha, taas oo sidoo kale maamusha si loo gaaro wada noolaanshaha ugu fiican ee udhaxeeya foomka iyo nuxurkiisa, habkaas oo u ogolaanaya inay bixiso qaab tayo sare leh oo daabacaadda ah isla mar ahaantaana u oggolaato inay muuqaal fiican ku yeelato macaamiisha hortooda.
Waa maxay muhiimadda ay leedahay nashqadeynta tifaftirka?
Meherad kasta, iyadoon loo eegin ha ahaato tifaftir ama dabeecad kale, dadka had iyo jeer waxaa loogu jeedaa waxa ay gaarayaan dareenkaaga hel.
Waxay u muuqan kartaa wax yar sheeko, si kastaba ha noqotee, waxaa la xaqiijiyay in dukaanka buugaagta, xaaladaha qaarkood, macaamiisha ay u arkaan wax badan soo jiidasho iyo xiiso badan buug sheeko ah oo leh jaan wanaagsan ama qosol leh oo aan lahayn mid leh dabool fudud oo caajis leh, iyada oo aan loo eegin waxa ay sheekooyinku ka hadlayaan.
In a daabacaadda tifaftirka wax walba waa muhiim, labadaba daboolka iyo qoraalka, iyo sidoo kale xadadka iyo midabada la isticmaalay, marka lagu daro qaabka qoraalka iyo sawirada. Mid kasta oo ka mid ah dhinacyadii hore waxaa loo aasaasay iyadoo loo eegayo shakhsiyadda daabacaad kasta, dadweynaha loo dirayo iyo dabcan, waxyaabaha lagu soo bandhigay.
Suurtagal ma ahan in qaab isku mid ah loo isticmaalo buug ka hadlaya daawo, sida dib-u-eegista saxaafadda oo ka hadlaysa wadnaha oo ah shaqada naqshadeeyayaasha ku guuleysiga qabashada nuxurka daabacaadda oo dhan oo si sax ah ugu gudbiya nuxurka mid kasta qaabkooda.
Guusha boostada wanaagsan Kuma salaysna kaliya tayada iyo tirada waxyaabaha aad ka kooban tahay, laakiin sidoo kale waxay u baahan tahay xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya qaabka daabacaadda iyo qaabkeeda, marka lagu daro habka loo soo bandhigo.
Marka nooca daabacaadda la aasaaso, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto waxyaabaha ay ka kooban tahay qaybaha muuqaalkeeda, iyadoo la tixgelinayo waxyaabaha soo socda:
Waxyaabo ama taageero: Kartoon, warqado kala duwan, iyo kuwo kale.
Qaab: Magazine, buug, wargeys, iyo kuwo kale.
Akhriska noocyada qoraalka: Cabbirka nooca iyo farta, midabka, kala dheereynta xariiqda iyo inta u dhexeysa xarfaha.
Sawirka: Tayada, qaabka, cabirka iyo midabka.
Sanduuqa qaab dhismeedka: Qaabka bogga.
Tifaftirka shabakadda ama shabakadda: Aaladda aad u isticmaasho isku dubbaridka macluumaadka.
Cunsurradan waa in loo istcimaalaa nidaam iyo iswaafajin midba midka kale iyo dabcan, waxa ku jira, habkaas oo ah natiijada ugu dambeysa noqo gebi ahaanba mid gaar ah, daabacaad asal ah oo shakhsiyadeed ku dhex jirta nooca ay ka hadlayso iyo suuqa ay ku jirto. Adoo helaya iskudhafka ugu fiican ee foomka iyo nuxurka, way fududaan doontaa in la dhiso bulsho akhristayaal daacad ah kuwaas oo kicin doona daabacaad nolol dheer ku jirta ganacsiga daabacaadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Waa maxay macnaha naqshadeynta tifaftirka?
Sideed ficil oo loogu talagalay Photoshop oo aadan seegi karin